Myanmar: Sarintanin’ny Fonja Iaraha-manoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2011 9:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Italiano, bahasa Indonesia, Español, English
Nisy Sarintanin'ny Fonja Iaraha-manoro ao Myanmar natsangana ho fanohanana ny hetsika fanafahana ny mpanao gazetin-dahatsary ‘Free Burma’. Ny sarintany dia mijery sy manome fampahafantarana fohy momba ny fonja 43 ao Myanmar
Ny gadra politika 300 ao Insein dia nogadraina nandritra ny fotoana lava dialava tokoa na dia noho ny raharaha tolona politika bitika aza
Ahitana fijoroana vavolombelona avy amin'ny gadra mpanao politika teo aloha izay nizara ny traikefa niainany tao am-ponja ihany koa ny tranonkala. Wai Moe, iray tamin'ireo gadra niharan'ny fampijaliana mafy.
Misy mpanao gazetin-dahatsary avy amin'ny Democratic Voice of Burma (DVB) miisa 17 voafonja. Iray amin'ny mpanao gazety mpaka sary voatazona i Hla Hla Win. Ity vehivavy ity dia notazonina noho ny tsy fampiasana môtô tsy voasoratra araka ny lalànan'ny Fanafarana/Fanondranana saingy naitatra ho 20 taona ny fanagadrana azy
Fantatra fa hisy ny Fihetsiketseham-panoherana mitaky ny fanafahana azy amin'ny herinandro hoavy eo anoloan'ny Ambasady Birmana ao Bangkok.